भारतको पेट्रोनामीको इतिहास, यसका परम्पराहरू र विशिष्ट पकवान | Absolut यात्रा
ग्यास्ट्रोनोमी अफ इण्डियाको इतिहास
लुइस मार्टिनो | | मा अद्यावधिक गरियो 25/01/2021 21:16 | भारत
को ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहास भारत यो समयको मिस्टमा शुरू हुन्छ। जे होस्, हामी एक पौराणिक क्षण स्थापित गर्न सक्छौं जुन तत्काल मा यसको मूल राख्छ हिमालयी agesषिहरूले मसला फेला पारे.
यो पौराणिक कथा तुच्छ छैन, किनकि यी मिसिकहरूसँग सँधै एक भएको पूंजी महत्त्व भारतीय खाना मा। वास्तवमा, ती कारणहरू मध्ये एक यो किन यो विश्वको परिचित छ र किन यो हो यो ग्रहमा सबैभन्दा मूल्यवान ग्यास्ट्रोनोमी मध्ये एक हो। यदि तपाईंलाई खाना पकाउन मनपर्‍यो र भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहासको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रो लेख पढ्न आमन्त्रित गर्दछौं।
1 भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहास: अनुष्ठान मूल
1.1 अनुष्ठान मूल
1.2 विदेशी प्रभाव
1.3 मसला, भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहास भरि आवश्यक
2 भारतमा खाना प्रोटोकल
3 भारतको केहि विशिष्ट पकवानहरू
3.1 दाल, भारतीय स्टाइल मसूर
3.2 छपाटी, पचासौं भारतीय रोटी
3.3 पुलाव चावल, भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहासमा मंगोलियाई प्रभाव
3.4 तण्डूरी कुखुरा, एक क्लासिक
3.5 सामोसा, एक स्वादिष्ट स्टार्टर
3.6 रायता, एक स्फूर्ति पाचन
3.7 लस्सी, पेय उत्कृष्टता
भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहास: अनुष्ठान मूल
भारतीय खाना, अरु सबै ठाउँमा जस्तै, खाना पकाउने को लागि स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन तयार पार्नु पर्ने आवश्यकता हो। तर थप रूपमा, यो सम्भवतaबाट सुरु भएको हो अनुष्ठान उद्देश्य, केहि चीज जुन यसलाई अन्य ग्यास्ट्रोनोमीबाट भिन्न गर्दछ।
वास्तवमा, हिन्दू खाना मूलतः एक थियो पवित्र चरित्र। मन्दिरमा भाँडाकुँडाहरू तयार पारिए जुन देवताहरूलाई चढाइन्थ्यो श्रद्धांजलि। तर, ती समयमा तीर्थयात्रीहरूका लागि खानाको रूपमा काम गरे। तसर्थ, यी विशेषता धेरै उपचार गुणहरू.
वास्तवमा, यो अभ्यास अझै जारी छ। देवताहरुलाई चढाएको खाना भनिन्छ भोग र यो केवलसँगै बनेको छ उत्पादनहरू प्रकृतिबाट सीधै। तपाईं यो प्रक्रियामा पाउनुहुने छैन। यो केवल रूखको सामान वा नारियलको शंख, कुनै ग्यास वा बिजुली जस्ता स्वाभाविक रूपमा देखा पर्ने मिडियाको साथ मात्र तताइएको छ।
गरम मसाला मसला
भारतीयहरूले यो अभ्यासलाई यति धेरै महत्त्व दिन्छन् कि मन्दिरमा भान्सेले प्रदान गर्दछ महान सामाजिक प्रतिष्ठा। र त्यस्तै चार्ज पनि छ वंशानुगत परिवारहरूमा। जो भाँडा माझ्छन्, पहिले नुहाउनु पर्छ र भान्सा सफा गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, प्रत्येक हिन्दू देवतासँग यसको सम्बन्धित डिश छ। उदाहरण को लागी, गणेश, यसको हात्ती टाउको लागि परिचित, यसको आफ्नै पनि छ gastronomic चाड। यस समयमा, आलु दही र मसलाको एक चटनीको साथ तयार गरिन्छ जुन दुबैलाई र निश्चित रूपमा हात्तीहरूलाई दिइन्छ।
जब भारत औपनिवेशिक थियो, यसको गेस्ट्रोनमीले बिभिन्न विदेशी प्रभावहरू प्राप्त गर्‍यो। तर यो हिन्दुहरुका लागि पवित्र रहेको छ। तपाईं यसको एक विचार प्राप्त गर्न सक्दछौं यदि हामी तपाईंलाई भन्छौं कि बच्चाको पहिलो खानाaद्वारा कभर गरिएको छ विशाल समारोह, मानौं यो तपाईंको बप्तिस्मा वा विवाह हो।
शताब्दियौंदेखि भारतको ग्यास्ट्रोनमीलाई प्रभावित पार्ने व्यंजनहरूमध्ये एउटा हो Portuguesa, ला मुसुलमाना, ला फारसी र अंग्रेजी मुख्य रूपमा। नतिजाको रूपमा, भारतीय ग्यास्ट्रोनोमी यसको विशेषता हो स्वादहरू, बनावट र रंगहरूको विशाल विविधता, साथै महान मान राखिएको मसला, तरकारी र चामल.
मसला, भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहास भरि आवश्यक
हामीले यस लेखमा भारतीय खानामा मसलाको महत्त्वबारे उल्लेख गरिसकेका छौं। तर यो यो हो कि तिनीहरूले यसको सबैभन्दा विशेषता राख्छन्। सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुनेहरूमध्ये हल्दी, जीरा, अदुवा, खोर्सानी, राई वा कालो रायो र धनिया। तर पनि हल्दी, मेथी, धनिया, केसर र Hing वा हींगको बोट।
भारतीयहरूले मसलालाई यति धेरै मूल्य दिए कि उनीहरूले यिनीहरूको संयोजन पनि बनाए। धेरै प्रसिद्ध तथाकथित छ garam masala, जुन पाँच बाट बनेको छ। यी सामान्यतया दालचिनी, लंगो, जायफल, काली मिर्च, र इलायची हुन्।
तर सबै भन्दा लोकप्रिय मसला छ करी पाउडर, जो करी बोट आफैंमा पीसएर बनाइएको हो उनीहरूको अर्को ठूलो विविधतासँग। तिनीहरू पनि बनेका छन् चटनीमा करी। यी मध्ये सब भन्दा राम्रो मरीनाड भनेर चिनिन्छ vindaloo र त्यो, जिज्ञासुपूर्वक, पोर्तुगाली मूल हो। तिनीहरू पनि उत्तिकै प्रसिद्ध छन् साग र मद्रास.
भारतमा खाना प्रोटोकल
हामी तपाईंलाई भन्दै थियौं कि हिन्दूहरूले खानालाई ठूलो मूल्य दिन्छन्। यसैले तिनीहरू सबै कुरामा उनको साथमा छक्क पर्नु पर्दैन एक अनुष्ठान। भाँडा एकल कन्टेनरमा दिइन्छ र यसका सामग्रीहरू दायाँ हातले लिन्छन्, विशेष गरी चार औंलाहरूले, किनकि त्यस हातको सूचकांक र बायाँका औंलाहरू दुवै अशुद्ध कार्यहरूको लागि मानिन्छ।
त्यस्तै, यदि कसैले तपाईंलाई भारतमा उनीहरूको हातले खाना दिन्छ भने, चिन्ता नलिनुहोस्। यो एक हो आदर र आतिथ्य को प्रदर्शन। उही अर्थमा, यदि तपाइँले उनीहरूले दिएको खानालाई अस्वीकार गर्नुभयो भने, तपाइँले एउटा देखाउनुहुनेछ धेरै असभ्य र तिनीहरू निराश हुनेछन्।
भारतको केहि विशिष्ट पकवानहरू
भारतको ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहासले धेरै विशिष्ट पकवानहरू छोडेको छ जुन अहिले विश्वभरि चिनिन्छ। यो असम्भव छ कि तपाइँलाई ती सबै तपाइँको उल्लेख गर्न को लागी। किनभने विशाल देशको प्रत्येक क्षेत्रको आफ्नै आकृति हुन्छ। त्यसकारण हामी तपाईंलाई केहि सब भन्दा बढि केहि बताउन बसेका छौं लोकप्रिय र स्वादिष्ट.
दल, भारतीय शैली दाल
दाल हुन् मसूरको दाना तिनीहरू भारतको क्षेत्र अनुसार फरक हुन्छन्। यद्यपि, सामान्यतया सबैसँग यस लेग्युम हुन्छन्, प्राथमिकता यसको रातो ढाँचामा, र अदुवा, हल्दी र लसुन। तिनीहरू चावल र रोटीको साथ सेवा गरीन्छन्।
चपाटी, Quintessential Indian रोटी
ठीक, सबैभन्दा सामान्य भारतीय रोटी हो चपाटी, जुन पूरै गहुँको पीठोको प्रकारले बनेको हुन्छ र हाम्रो जस्तो आकारको हुन्छ केक। यो कसरी तयार छ मा निर्भर गर्दछ, यो बिभिन्न नामबाट जान्छ। यसैले, नान यो ओभनमा बनेको हुन्छ, सामान्य रूपमा चुलोको भित्तामा चिप्लिन्छ। अर्कोतर्फ roti यो ग्रिल र मा बनेको छ puri भुटेको अर्कोतर्फ, पराठा यो तरकारीले भरिएको रोटी हो।
ARROZ पुलाउभारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहासमा मंगोलियाली प्रभाव
धान भारतमा हजारौं तरिकामा बनाईन्छ। तर सबैभन्दा परम्परागत भनिने धान छ पुलाउ o pilau, तरकारीको साथ बनेको, निश्चित रूपमा मसला र मंगोलियाली शैलीको मासु। यो समान प्रभावको अर्थ फल पनि यसमा थपियो।
पोलो तनदुरी, एक क्लासिक
यो डिश भारतमा मात्र परम्परागत छैन, तर यो पश्चिमका भारतीय रेस्टुरेन्टहरूमा पनि क्लासिक भएको छ। यो बिभिन्न तरीकाले पनि गर्न सकिन्छ, तर यो यसको सब भन्दा आधारभूत संस्करणमा हो, मरीनेट गरिएको र मसलायुक्त कुखुरा जुन चुलोमा बनेको हुन्छ। वास्तवमा, यसको नाम यो पकाइएको छ भन्ने तथ्यबाट आउँदछ ओभन तनदुरी, माटोबाट बनेको।
सामोसा, एक स्वादिष्ट स्टार्टर
यो, सायद, बाँकी विश्वमा भारतको सबैभन्दा प्रसिद्ध डिश हो, जुन वसन्त रोल्ससँग मिल्दोजुल्दो छ चिनियाँ ज्योतिष विज्ञान। समोसा हो एक भरिएको डम्पलिंग आलु, मटर, प्याज र मसलाको। जे होस्, तपाई यसलाई अन्य तरकारीहरू वा कुखुराको साथ पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
रायता, एक स्फूर्ति पाचन
सामान्यतया, यो एक हो दही तरकारीहरू, विशेष गरी काकडी, र सुगन्धित जडिबुटीको साथ संयुक्त। यद्यपि हिन्दु ग्यास्ट्रोनोमीमा त्यहाँ एक हजार विभिन्न विवरणहरू छन्।
लस्सी, Quintessential पेय
हिन्दू धेरै पिउँछन् दुधको चिया। तर अझै विशिष्ट छ लस्सी, तरल दहीबाट बनेको जसमा केरा, आम वा पपीया जस्ता फलहरू थपिन्छन्।
अन्तमा, हामीले तपाईंलाई एउटा राम्रो भाग देखाएका छौं भारतीय ग्यास्ट्रोनोमीको इतिहास, साथै तिनीहरूको सीमा शुल्क खाजा खाने समयमा र यसको केही सबै भन्दा सामान्य डिश। अब तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयास गर्न निर्णय गर्नु पर्छ। तपाईं यो पश्चाताप छैन किनभने ती स्वादिष्ट छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » ग्यास्ट्रोनोमी अफ इण्डियाको इतिहास